Jeremia 42 - Ny Baiboly
Jeremia toko 42
Ny vahoaka mandositra mankany Ejipta.
1Tamin'izay, nanatona an'i Jeremia avokoa ny mpifehy miaramila rehetra mbamin'i Johanana, zanak'i Kare, Jezoniasa, zanak'i Osaiasa, ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe, 2ka nanao taminy hoe: Aoka ho tonga eo anatrehanao anie izao fihantanay izao; mivavaha amin'ny Tompo Andriamanitrao, ho an'izao sisa rehetra izao, fa maro izahay taloha, nefa efa tonga vitsy sisa araka izao hitan'ny masonao izao. 3Aoka hambaran'ny Tompo Andriamanitrao aminay, izay làlana tokony hizoranay, sy izay zavatra tokony hataonay. 4Ary hoy Jeremia mpaminany, namaly azy ireo: Dia reko izany; ka indro aho, hivavaka amin'ny Tompo Andriamanitrareo araka ny teninareo; ary hambarako aminareo avokoa, fa tsy misy hanafenako izay havalin'ny Tompo anareo.
5Dia hoy izy ireo tamin'i Jeremia: Aoka Iaveh no ho vavolombelona marina sy mahatoky miampanga anay, raha tsy manatanteraka ny zavatra rehetra araka ny tenin'ny Tompo Andriamanitrao izay hampitondrainy anao ho anay izahay. Hanaiky ny feon'ny Tompo Andriamanitray, izay nanirahanay anao izahay, 6na ho soa na ho ratsy, mba hihavian'ny soa aminay amin'ny fanekenay ny feon'ny Tompo Andriamanitray.
7Nony afaka folo andro, tonga tamin'i Jeremia ny tenin'ny Tompo, 8ka nantsoiny Johanana zanak'i Karea, mbamin'ny mpifehy miaramila rehetra teo aminy, sy ny vahoaka rehetra na kely na lehibe, 9dia nilazany hoe: Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely, izay nanirahanareo ahy hitondra eo anatrehany ny hatakareo: 10Raha manohy ny fonenana amin'ity tany ity hianareo, dia haoriko, fa tsy horavako, hamboleko, fa tsy hongotako, fa anenenako ny loza namelezako anareo. 11Aza matahotra ny mpanjakan'i Babilona, izay atahoranareo; aza matahotra azy - teny marin'ny Tompo, - fa momba anareo aho, hamonjy sy hanafaka anareo amin'ny tànany. 12Hataoko mahazo famindram-po hianareo, ka hamindra fo aminareo izy, dia hampody anareo amin'ny taninareo. 13Fa raha hoy kosa hianareo: Tsy honina amin'ity tany ity izahay; ka tsy manaiky ny feon'ny Tompo Andriamanitrareo hianareo; 14raha hoy hianareo: Tsia fa any Ejipta no halehanay, izay tsy hahitanay ady, tsy handrenesanay feon'anjomara, tsy hahatsiarovanay noana, ka any no honenanay; 15dia henoinareo ny tenin'ny Tompo, ry sisa amin'i Jodà: Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitr'Israely: Raha mitodi-maso mankany Ejipta hianareo mba ho any ka miditra hitoetra any hianareo, 16ny sabatra atahoranareo, hahatratra anareo any amin'ny tany Ejipta, ny mosary ahinareo mafy, hanjohy anareo any Ejipta, ary ho faty any hianareo. 17Izay rehetra mitodi-maso mankany Ejipta mba ho any sy honina any, dia ho fatin'ny sabatra sy ny mosary ary ny pesta avokoa, fa tsy misy ho velona sy afa-mandositra ny loza hahatrako aminy. 18Fa izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Toy ny niantefan'ny fahatezerako amam-pahavinirako tamin'ny mponina tao Jerosalema, no hiantefan'ny fahatezerako aminareo, nony tafiditra any Ejipta hianareo, ka dia ho fisahato, fitalanjonana, fanozonana ary fandatsan'ny olona hianareo sady tsy hahita ity tany ity intsony. 19Ry sisa amin'i Jodà ô, izao no lazain'ny Tompo aminareo: Aza miditra any Ejipta hianareo; fantaro tsara fa efa nanariko am-pahibemaso hianareo izao androany. 20Fa efa naningo-tena hianareo, tamin'ny nanirahanareo ahy ho amin'ny Tompo Andriamanitsika, nanao hoe: Mivavaha amin'ny Tompo Andriamanitsika ho anay, fa izay rehetra holazain'ny Tompo Andriamanitsika, dia ambarao anay fa hotanterahanay avokoa. 21Nanambara izany taminareo aho androany, fa tsy nihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitrareo kosa hianareo, na ny zavatra inona na ny zavatra inona nanirahany ahy ho aminareo.
22Koa aoka ho fantatrareo marimarina izao, fa ho fatin'ny sabatra sy ny mosary ary ny pesta any amin'ny tianareo aleha honenana hianareo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0393 seconds